म राजदुतको पद छोडेर अरु कुनै पद लिन वा नियुक्ती हुन आएको होइन : राजदुत उपाध्याय
नेपालका लागि भारतका निवर्तमान राजदुत दीपकुमार उपाध्यायले पदबाट राजिनामा दिएर नेपाल आएका छन् । मंसिरमा हुने केन्द्रिय प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने लक्ष्य लिएर राजिनामा दिएर आएका उपाध्यायसँग ऋषि धमलाले कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजदुत जस्तो गरिमामय पद छोडेर किन राजनीतिमा आउनुभयो ?
विशेष परिस्थितीमा सरकार, आफ्नो पार्टी र अन्य पार्टीसमेतको आग्रहमा म कुटनीतिक जिम्मेवारीमा गएको थिएँ । भूकम्प र संविधान निर्माणपछिको असहज परिस्थितीमा म भारतका लागि राजदुत भएर जीवनकै अविष्मरणीय क्षणको रुपमा काम गरेँ ।
यतिबेला भने देशमा संविधान कार्यान्वयन अन्तरगत चुनाव चुनौतिको रुपमा उभिएको छ । यो समयमा समाजसेवा र राजनीतिमा नै आफ्नो भूमिका देखाउनु उचित हुन्छ कि भन्ने लाग्यो । कपिलवस्तुको माटो र त्यहाँका आदरणीय जनताहरु र मेरो जीवनका समाजिक राजनीति साथीहरुले पनि भूमिका खोज्नुभयो र त्यही अनुसार सल्लाह दिनुभयो । सोही अनुसार नयाँ कदम चालेको हुँ ।
तपाईं जस्तो व्यक्ति अहिले राजनीतिमा आउँदा फाइदा छ र ?
हामी बाँचुन्जले जनता र देशप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कुन बेला कहाँ कस्तो भूमिका खेल्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । राजदुतको भूमिका गरिमामय थियो, तर अहिले नेपाल भारत सम्बन्धको जग बसिसकेको छ । अब जोसुकै व्यक्तिले पनि अगाडि बढाउन सक्छ । अहिले देशको राजनीति असहज परिस्थितीमा छ । देशले फड्को मार्नुपर्ने बेलामा हामी देशभित्रै बसेर पुरानो आफ्नो जीवनशैलीबाट बढि योगदान दिन सक्छु कि भन्ने नै मलाई अभिप्रेरणा हो ।
लाभका लागि मर्यादाको खिल्ली उँडाइयो भन्ने आरोपसमेत लगाइएको छ नि ?
म राजदुतको पद छोडेर यहाँ अरु कुनै पद लिन वा नियुक्त हुन आएको होइन । पद सुविधा वा लाभका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मन्त्री हुनुभन्दा धेरै राम्रो भारतका लागि राजदुत बन्दा फाइदा हुन्छ । अहिले त म बल्ल गृह जिल्ला गएर त्यहाँका साथीभाइ, जनता, शुभचिन्तकसँग सल्लाह गरेर कदम चाल्ने हो ।
अब तपाई कुटनीतिक जीवनबाट अगल भएर पूर्ण रुपमा राजनीतिमा सक्रिय हुने हो ?
कुनटनीति र राजनीति भनेका एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका क्षेत्र हुन् । म जीवनलाई नै पाठशाला मान्ने मान्छु हुँ । म मेरो विवेकले देखेसम्म राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने मान्छु हुँ । मैले जानेको अनुभव र ज्ञानलाई समाज र राष्ट्रको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नै मेरो प्रयास रहने छ । हामी कुनै पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन मिल्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा राजदुत भएकाहरु राजिनामा दिन वा पद छोड्न चाहेको पाइदैन । तर तपाई त काम गर्ने मौका र समय बाँकी हुँदाहुँदै राजिनामा दिएर आउँदा मन्त्री सासंद बन्न लोभ गरेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
हामी आफ्नो विषयमा के गर्ने के बोल्ने भन्ने कुरामा स्वतन्त्र छौँ । कानुनभित्र रहेर गरिएको कदमलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अरुले सोचेजस्तो स्वार्थ बटुल्न म राजिनामा दिएर आएको होइन । मैले चाहँदैमा मेरो कुनै स्वार्थ पूरा पनि हुन सक्दैन । मैले त लाभलाई त्यागेर आएको हुँ । मेरो अन्तस्करणबाट नै मलाई मेरो देशको माटोले बोलाएको जस्तो लागेर आएको हुँ । चुनाव लड्ने कुरा पनि जिल्लाको वातावरणमा भर पर्छ ।
कपिलवस्तुमा त तपाईको विकल्प छैन होला नि उम्मेदवारीका लागि ?
त्यस्तो भन्न मिल्दैन । धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । नयाँ पुस्ताका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । सबैलाई चित्त बुझाएर सबैको भावना समेट्नुपर्छ । म नै निर्विकल्प हुँ भनेर भन्दिन । मेरो राजिनामा पनि स्विकृत भएको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सम्मानित अवतरण होस् भनेर अनुरोध गरेको छु ।
अन्त्यमा, नेपालमा भएको वाम गठबन्धनलाई भारतले कसरी हेरेको छ ?
सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा मित्रराष्ट्रहरुको एक हदसम्मको चासो हुनु र सुचना लिनु सामान्य कुरा हो । त्यसभन्दा बढि कुनै धारणा छैन । नेपालको राजनीति हामी आफैँ गर्ने हो । अरुलाई औँला उठाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । म नेपाल आउनुभन्दा अघि भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वारजसँग मर्यादाको भेटघाट गर्न खोजेको थिएँ । भेटमा खासै धेरै कुरा केही पनि भएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
सम्भावना छ । अरुण तेस्रो योजनामा अहिले कुनै बाधा अड्चन छैन । अरुण तेस्रो शिलन्यासका लागि तयार छ । पञ्चेश्वर परियोजना पनि दुवै प्रधानमन्त्रीको सदासयतमा धेरै कुराहरु अगाडि बढेको छ । तर मोदी नेपाल कहिले आउने भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा भर पर्छ । विकासका काम रोक्ने काम गर्नुहुँदैन ।